TOMATO ALSU: SHARAX, SAWIR, DABEECADAHA BEERISTA - NOOCYO YAANYO
Horyaalka hore ee bislaaday ee yaanyada Alsou
Maxay noqon kartaa mid ka weyn tan yaryar, casiir leh, salad cusub oo salad cusub ah? Marka ay soo qaadaan miraha cayayaanka ah, waxay rabaan inay isla markiiba dhadhamiyaan qoyaankooda oo dareemaan dhadhanka casiirkooda.
Kala duwan yaanyada la doorto ayaa ku farxi doona oo keliya miro iyo casiirnimada midhaha, laakiin sidoo kale sahlanaanta daryeelka. Bannaanka intiisa badani waxay ku heshiiyaan in yaanyo Alsou haysto sifooyinka ugu fiican, sharaxaad ka mid ah waxaan ku siin doonaa hoos.
Alsou yaanyo - natiijada ka soo baxda shaqada Siberia - waxaa lagu daray Diiwaanka Gobolka isagoo tilmaamaya beeritaanka dhulalka bari iyo galbeedka Siberia iyo Ural. Taasina waxay u mahadcelineysaa kartida aad u fiican ee lagu adkeynayo xaaladaha khatarta ah ee cimilada.
Buundada yaanyo "Alsou", sida noocyada kala duwan ee wadnaha ah, daciif ah, leh stem khafiif ah iyo caleemo qulqulaya. Sababtoo ah muuqaalkan, geedka wuxuu u baahan yahay qalajin iyo qanjaruufo joogto ah. Beerta lagu taliyay in ay ka sameeyaan baadiyaha ah ee 2-3 afkoda.
Waa muhiim! In lagu koriyo, duurka u koraan 1.5 mitir (waxaa jira fursado ilaa laba mitir), iyo hoos cirka furan - oo ku saabsan 80 cm.
Yaanyada bislaado waa mid aad u ballaaran, wadnaha-qaabeeya, casaan dhalaalaya, gaaro cabbir ka badan 300-500 g Meaty, laakiin ma aad u casiir leh. Qiimaha gaarka ah waxaa ugu wacan macnaha sare ee sonkorta iyo adkaha.
Tamaandhada noocyada kala duwan waxay yeelan kartaa qaab kale: waxay ku xiran tahay xaaladaha sii kordhaya. Inta badan waxay yihiin kuwo wadnaha isku qaabeeya, marmarka qaarkoodna waxay noqon karaan wax yar oo sarreeya.
Qirashada tamaandhada "Alsou" waa mid lagama maarmaan u ah sharaxaadda sifooyinka ugu muhiimsan. Sidaas, noocyo kala duwan ayaa u bislaaday. Laga soo bilaabo xilliga abuurista miraha ilaa inta ugu horeysa ee miraha bislaado la helo, waxay qaadataa 90-100 maalmood.
Yaanyadani waxay ku xiran tahay noocyada kala duwan, laakiin waxay ku kala duwanyihiin hal muuqaal: waxaa lagu beerayaa carrada aan la ilaalin karin iyo xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Yaanyo Tani waxay leedahay dhalid joogto ah oo sarreeya - 7-9 kg / m², ama 4 kg baadiyaha. Xitaa gobollada waqooyi waxay heli karaan natiijo wanaagsan.
Wax badan ka baro noocyo kala duwan oo yaanyo ah sida "Sevryuga", "Explodion", "Primadonna", "Aphrodite f1", "Madaxweynaha", "Casanova", "Clusha", "Samara", "Miracle of the Earth", "Rapunzel", " Star of Siberia, Yamal, Sugar Bison, Heart Golden.
Waxay u egtahay in yaanyo badani isku mid yihiin, iyo in la doorto mid ama mid kale oo aan kala duwaneyn. Laakiin kuwa keliya ee aan ka fekerin faa'iidooyinka ama khasaarooyinka dhaqan gaar ah waxay sabab u noqon karaan sidan. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee yaanyo "Alsou" waa:
universality of beerashada;
xilliga hore ee Bisaylkiisa;
difaaca sare ee cudurrada;
fududahay sii kordhaya;
Sababtoo ah miro waaweyni waa suurtogal in la ilaaliyo gabi ahaanba.
In kasta oo xaqiiqda ah in kala duwanaanta noocaas ah lagu sifeeyo wax-soo-saarka wanaagsan, natiijadan waxaa lagu gaari karaa iyadoo la ilaalinayo shuruucda aasaasiga ah ee beerto iyo daryeelka.
Sidaas, yaanyada this jecel qorraxda iyo carrada taajir ah. Sidaa darteed, goobta waa in la doortaa furan, oo leh dhul bacrin ah. Markaad beertid adoo raacaya qorshaha 70x50 cm. Qalabaynta sariiraha waa in aysan aheyn.
Waa muhiim! Tan iyo geedo of yaanyo "Alsou" ma aha xoog kala duwan, waa in la beeray si taxadar lehsi aanay u inay dhacaan xididdada. Waxaa fiican in lagu bedelo kubad adag oo ballaaran.
Dhudhooyinka geedo waa inaysan aheyn qoto dheer - waa ku filan in ay jirto qayb isku mid ah oo dhulka ah sida ka hor inta aanad dhicin.
Dayactirka goobta furan
Sida dalagyo badan oo qudaar ah, yaanyada Alsou waxay u baahan tahay bacriminta joogtada ah iyo waraabinta - markaa kadib ayaa laga heli karaa goosashada wanaagsan. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la ilaaliyo habka waraabinta xilliga miro. Ku waraabi dhirta sida dhoobada sare, iyo maalmaha kulul waa maalin kasta.
Waxay u fiicantahay inaad ku quudiso dhirta 3-dii toddobaad walba leh Bacriminta macdanta culus (tusaale ahaan, Qorshaha). Boron iyo potassium ayaa si gaar ah muhiim ugu ah yaanyo.
Waxaad bacrimin kartaa warshadda leh Doodwanaag, humus iyo Bacriminta kale ee organic. Si kastaba ha noqotee, waa inaadan ku biirin, sababtoo ah waxay taasi horseedi kartaa kor u kaca cagaarka, taas oo ka hortagaysa bedelaadda hawada.
Ha ilaawin ka saarista cawska, jaridda dhirta iyo duurka pasyonovane.
Waa muhiim! Tan iyo tamaandhada "Alsou" way adag tahay in la adkeeyo tiro badan oo ah ugxan, baahida inflorescences dheeraad ah waqtigeeda tirtir.
Khabiiro ku takhasusay tamaandhada "Alsou" waxay calaamadeyneysaa ma aha oo keliya dhalidda wanaagsan, laakiin waxay sidoo kale iska caabin kartaa cudurrada kala duwan, taas oo hagaajinaysa sifooyinka noocyada kala duwan.
Si looga hortago khalkhalka cayayaanka, waxaa ku filan in lagu dhaqmo dhaqanka cayayaanka hal mar bishii.
Marmarka qaarkood geedka ayaa saameyn ku yeelan kara barxadda. Si aad uga takhalusto duurka iyada waxaa lagu daaweeyaa daawooyinka ku salaysan naxaas. Meelaha ay dhibaatadu saameysey waa la saaraa si aan cudurku u sii faafin.
Ma taqaanaa? Yaanyada Brown waxay u dhaqdhaqaaqaan si dhakhso badan haddii deriska ay yihiin tufaax. Aqoonta ay soo saartey midhahaani waxay kor u qaadaysaa Bisaylka degdegga ah. Waxaad ku beddeli kartaa tufaax leh wargeys ah oo yaanyo ku duuduuban 10-14 maalmood.
Waxaad ku dili kartaa midhaha maaddaama ay u bislaadaan. Sida caadiga ah, waa Juun-Agoosto. Haddii hadhuudhku uusan u bislayn ka hor bilawga cimilada qaboobaha, dhirta ayaa loo wareejin karaa sanduuqyada waxayna u baxaan inay ku bislaadaan gudaha gudaha, ama miraha buniga ah ayaa la goyn karaa waxaana loo oggol yahay inay gaaraan qolka heerkulka qolka. Sida aad u arki karto, yaanyo "Alsou" waxay heleen aqoonsi buuxa oo badan oo ka mid ah beeralayda khudradda ah ee loogu talagalay isku-dhafka gaarka ah ee duurka hooseeya oo leh miraha waaweyn. Intaa waxaa dheer, beerista noocyo kala duwan uma baahna dadaal dheeraad ah iyo waqti.
Ma taqaanaa? In qarniyadii dhexe, dalal badan, yaanyada ayaa la mamnuucay in ay isticmaalaan. Tani waxay sababtay xaqiiqda ah in yaanyada looma sheegin Kitaabka Quduuska ah. Intaa waxaa dheer, beerashada qoyan waxay keentay dalagga beeraha, iyo qaybo aan la karin ayaa sabab u noqday cudurka iyo dhimashada.